पोखरा अस्पतालमा सुत्केरी मृत्युः प्रहरी र आफ्न्त बिच झडप ७ जना घाइते (झडपको भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > पोखरा अस्पतालमा सुत्केरी मृत्युः प्रहरी र आफ्न्त बिच झडप ७ जना घाइते (झडपको भिडियो सहित)
पोखराको पश्चिमाञ्चल सामुदायीक अस्पतालमा सुत्केरीको मृ*त्यु भए पछि तनाब सृजना भएको छ । बिहीबार बिहान सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल आएकी कास्की अन्नपुर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ७ लान्दुकी ३३ बर्षिय निसाकुमारी थापाको मृ*त्यु भएको हो ।
चिकित्सको लापरबाही मृ*त्यु भएको भन्दै आफन्त र प्रहरी बिच झडप हुदाँ ७ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा ४ जना प्रहरी र ३ जना आफ्न्तहरु घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा प्रहरी निरिक्षक विजय भण्डारी, हवल्दार मिन बहादुर पाण्डे, प्रहरीहरु रुपा परियार र डोलराज नेपाली घाइते भएका छन् । त्यसै गरि आफ्न्तहरु शोभाकर पौडेल, नरबहादुर थापा र रेशम थापा घाइते भएका छन् ।
सुत्केरी व्याथा लागे पछि बिहीबार बिहान निशा अस्पताल आएकी र बिहीबार साझँ बच्चा जन्माएको उनका भाई बसन्त थापाले जानकारी दिए । सुत्केरी भएपछि अत्याधि रक्तसाब्र भएको उनले बताए । उनले रक्तसाब्र भएपछि रगत नबक्ने औषधी गर्नु पर्ने थियो तर डाक्टरले औषधी नगरी अप्रेसन गरेका कारण दिदीको ज्यान गएको बताए ।
भर्खरै गयो शक्तिशाली भूकम्प, मानिसहरुको भागदौड
पूर्वपत्नी मीनासँग दुःखी हुदै मनोज गजुरेलले भनेः अब न्यायका लागि खुट्टा उचाल्दैछु
म हा मारीको झन ख तरनाक भे रियन्ट आउने डब्लुएचओको चे ता वनी, कसरी बच्ने ?
मेरै साथीले मलाई त्यहि भिडियो भा इ र ल गरिदिन्छु भन्दै….
दिलीप कुमार गुमाएको दुख विर्सन नपाउँदै बलिउडमा फेरी शो क, अर्का दिग्गज कलाकारको पनि निधन
पुजाको अर्को वर्ष बिहे ? भन्छिन् ‘जिवनमा कोहि आएको छ, तर त्यो